मान्छेको ज्यान बचाउने नियमको पनि किन विरोध भइरहन्छ ? - The Public Today
मान्छेको ज्यान बचाउने नियमको पनि किन विरोध भइरहन्छ ?
२९ भाद्र २०७७, सोमबार ०९:२२
भदौ २९ गते । गाडीको सिटबेल्ट होस् या कोरोनाविरुद्ध जोगाउन सक्ने मास्क, कतिपय मान्छेले यस्ता ज्यान बचाउने नियमको पनि विरोध गर्ने गरेका छन् । मास्क लगाउन नमानेकी एक महिलालाई यस सम्बन्धी प्रश्न गर्दा उनले भनेकी छन्, “मलाई मन पर्दैन । मलाई त्यो लगाउनैपर्छ भनेपछि झन् प्रयोग गर्न मन लागेन ।”
उनकै नजिक उभिइरहेका अर्का एक पुरुषले पनि भनेका हुन् , “यो महिला पुरुष सबैमा लागु हुन्छ । म मेरो जीवनका लागि आफैँ जिम्मेवार हुन चाहन्छु । र मलाई मेरो यस सम्बन्धी अरुले आदेश दिएको मन पर्दैन ।”
कोभिड महामारीका बेला मास्क अनिवार्य गरिँदा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने प्रदर्शनकारीहरुसँग कुरा गर्दा यस्तै किसिमका संवादको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनीहरुले केवल असहजता वा शंकाका कारण मात्र यस किसिमले विरोध जनाउँदैनन् । यो एक प्रकारले सरकारी अधिकारीको जबरजस्ती लागू आदेश प्रतिको असन्तुष्टि हो ।
मास्क मात्र नभएर मानिसहरु यसैगरी पहिले सवारी चलाउँदा सिट बेल्ट पनि लगाउन मान्दैनथे । बिनासिट बेल्ट गाडी चलाउनु कानुनविरुद्ध भए पनि कतिपय मानिसहरु अझै ज्यान जोखिममा राखेर सिट बेल्ट नबाँधी गाडी कुदाउँछन् ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा यी दुईवटै विषय अधिक चर्चामा आएका छन् । यसरी धेरै कानुनहरु अचानक अनिवार्य लागू गर्दा थुप्रै मानिसहरुले यसलाई तत्काल अपनाउन सक्दैनन् । चाहे त्यो सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम नै किन नहोस् तर त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्ने विगतका घटनाले पनि देखाउँछ ।
कुनैबेला सिटबेल्टको प्रयोगप्रति पनि शंका व्यक्त गरिएको थियो किनकि यसमा गाडी निर्माता, इन्स्योरेन्स कम्पनी, कानुन, राजनीतिज्ञ र चालक सबैको निहीत स्वार्थ रहेको देखिन्थ्यो । अहिले मास्कलाई पनि त्यहि दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।
१९८५ सम्म पनि ६५ प्रतिशत अमेरिकीहरु असहज हुने भन्दै सिटबेल्ट अनिवार्य गरिनेको विरुद्धमा थिए । त्यसबेला बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीपछि न्युयोर्क सिटबेल्ट अनिवार्य गर्ने पहिलो अमेरिकी स्टेट बनेको थियो । अमेरिकामा जसरी नै युगोस्लोभियामा पनि सिट बेल्ट सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीमय रह्यो । सिटबेल्ट प्रयोग नगरेमा ७५ डलरसम्मको जरिवानासहित कडा कानुन लागु गरिए पनि त्यहाँका मानिसहरु दुर्लभै यसको प्रयोग गर्ने गर्दथे ।
यसले के स्पष्ट पार्छ भने ज्यान बचाउने कानुन भए पनि त्यसलाई सजिलै लागु गराउन सकिँदैन । केही समय अगाडि ब्राजिलमा १२ हजार मानिसहरुमा गरिएको एक अध्ययनमा त्यहाँका ३० प्रतिशत मानिसले गलत तरिकाले, अर्थात नाक वा मुख देखाएर मास्क लगाउने गरेको पाइएको हो । जबकि ब्राजिलमा संक्रमित सङ्ख्या ४३ लाख भन्दा धेरै छ भने १ लाख तीसहजार धेरैको मृत्यु भइसकेको छ जुन विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमा पर्छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा अहिले ७७ प्रतिशतले मास्क लगाउन थालेका छन् जसको दर फ्रान्समा अझ धेरै छ तर जर्मनीमा चाहिँ धेरै कमले मात्र सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग गर्छन् । यसमा बेलायतीहरु भने धेरै पछाडि रहेको मानिन्छ । त्यहाँ अझै पनि थुप्रै मानिसहरुले मास्कलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तापनि पछिल्ला केही हप्तामा फेस मास्क विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरुको यसप्रतिको धारणा बिस्तारै बदलिँदै गएको विभिन्न सर्वेक्षणका डाटाले देखाएको छ । र सिट बेल्ट जसरी नै यसलाई अपनाउनेको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । बीबीसी